“သည်နှလုံးသား၏မြင်နိုင်စွမ်းအားမှ မျှော်လင့်ရာမဲ့ အသိအာရုံသို့”| Real Conversion
“သည်နှလုံးသား၏မြင်နိုင်စွမ်းအားမှ မျှော်လင့်ရာမဲ့ အသိအာရုံသို့”
ဒေါက်တာအာရ်အယ်လ်ဟိုင်မာဂျေအာရ်၏ ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ဇွန်လ၁၃ရက်၊လော့အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့ ညနေဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားတော်မူသောဒေသနာ။
ယနေ့ညတွင် ခါတိုင်းပုံမှန်ဟောကြားသော လ(အနထအကal)အဓိက ကျမ်းပိုဒ်ပါအကြောင်းအရာကို ဟောကြားနည်း။ဖြင့်ဟောကြားမည်မဟုတ်ဘဲ၊ ကျမ်းတစ်ပိုဒ်ချင်းစီ၏ နက်နဲသောအရာကိုလည်း ဖော်ထုတ်ဟောကြားမည် မဟုတ်ပါ။ နိုးကြားပြီး ပြောင်းလဲမှုနှင့်ဆိုင်သော ကျမ်းစာကိုလေ့လာသင် ကြားသွားမည် ဖြစ်သည်။ကျေးဇူးပြု၍ (ရောမဩဝါဒစာ၃း၁၈) ကိုအသံကျယ်လောင်စွာ အတူတကွ ဖတ်ကြပါစို့။
ထိုကျမ်းသည် ဇာတိပကတိလူသားများ၏ အခြေအနေကို ဖော်ပြပါသည်။ တမန်တော်ကြီးက ဆက်လက်၍ အငယ်၉၌လည်း ယုဒလူ၊ ဟေလသလူအပေါင်းတို့သည် အပြစ်ရှိကြောင်းကို အထက်ကဖော်ပြခဲ့ပြီဟူ၍ ဖော်ပြရေးသားထားပါသည်။ဆိုလိုသည်မှာ” လူအပေါင်းတို့သည် အပြစ်တန်ခိုးအုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက် ရှိနေကြသည်”ဟုဆိုလိုပါသည်။လူသည်မွေးစကပင် အပြစ်၏လွှမ်းမိုးခြင်းကို ခံကြသည်။အပြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မိဦးဖဦးအာဒံဆီက အမွှေခံရခြင်းဖြစ်၍ “အကြောင်းမူကာ၊အပြစ်တရားသည် တယောက် သောသူအားဖြင့် ဤလောက သို့ဝင်၍၊အပြစ်တရားအားဖြင့်၊သေခြင်းတရားဝင်သည်နှင့်အညီ၊လူအ ပေါင်းတို့သည် အပြစ်ရှိသောကြောင့် သေခြင်းသို့ရောက်ရကြ၏(ရောမ၅း၁၂)၌ဖေါ်ပြထားပါသည်။
“ထိုသေခြင်း” ဟူသည်ဘုရားရှင်၏ ပညတ်ချက်ကို အာဒံကျူးလွန်ခဲ့သော နေ့ကစ၍ အပြစ်ကျူး လွန်သော ပထမဆုံးသောလူသား ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထာ၀ရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား “ထိုအပင်၏ အသီးကိုကားမစားရ၊ စားသောနေ့တွင် ဧကန်ဧမှန်သေရမည်ဟု လူကိုပညတ်ထားတော် မူ၏” (ကမ္ဘာ၂း၁၇)။ထိုပညတ်ထားသည့်အတိုင်း အာဒံအပေါ်၌ကျရောက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ စားသောနေ့ခြင်း တွင် အာဒံသည်ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ “သူသည် ထာ၀ရဘုရားနှင့် ကွဲကွာခဲ့ရပါပြီး အပြစ်၌သေသောသူဖြစ်သည်”
(ဧဖက်၂း၅)။ လူမျိုးနွယ်စုတိုင်းသည် အာဒံမှတဆင့် ပေါက်ဖွားလာကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အပြစ်၌ သေဆုံးသော အာဒံမှ ဆင်းသက်လာသော လူတိုင်း “အပြစ်၌ သေဆုံးရကြသည်”။ တမန်တော်ကြီး ဖော်ပြရေးသားထားသော (ရောမ၃း၉) လူ၏ ပကတိအခြေအနေသည် “အပြစ်၌ ပြိုလဲသောသူ” အပြစ်၌ သေဆုံးသောသူ၊အပြစ်၏ လွမ်းမိုးခြင်းကို ခံရကြသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။
ထို့အပြင်၊အခန်းငယ်(၁၀)မှ(၁၈)အထိ၌ တမန်တော်က ဖော်ပြထားသည်မှာ လူသား ပကတိအခြေအနေအား ကြောက်မက်ဖွယ်သော စကားလုံးဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။
“ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့သော အကြောင်းသည် သူတို့မျက်စိ၌ မထင်ဟုကျမ်းစာ လာသတည်း(ရောမ၃း၁၈)။
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သော လူတစ်ယောက်နှင့် ကျွန်ုပ်၏ ကာယလေ့ကျင့်ခန်း၌ စကားပြောဖြစ်ခဲ့ကြ၏။ အတူတကွ ရေကူးခဲ့ကြပြီး၊ခေတ္တခဏ အနားယူပြီး စကား ဖလှယ်ပြောကြားခဲ့ကြ၏။ ထိုသူက “ငါသည် အချိန်ပေါင်းများစွာ အထိ ဘုရားမဲ့ ဝါဒီသမားဖြစ်ခဲ့ သည်ဟူ၍ ပြောခဲ့သည်။ နောက်တနေ့တွင် ဘာသာတရားနှင့် ပတ်သက်သော (သီအိုရီ)သူ၏ သဘောထားကို ရှင်းပြခဲ့သည်။ ထိုသူက”ဘာသာရေးဆိုသည်မှာ အကြောက်တရားနှင့် စတင်တာဖြစ်တယ်”ဟူ၍ ရှင်းပြခဲ့တယ်။ ထိုသဘောတရားသည် အတွေးအမြင် သစ်တော့မဟုတ်ပါ။ လူတိုင်း ပြောဆိုလက်ခံသော အရာပင်ဖြစ်၏။ ထိုကဲ့သို့ ပြောဆို ဆွေးနွေးမည့်အစား “သင်ဘာကို ကြောက်နေသလဲ့”?ဟူ၍ မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့၏။ ထိုသူက “သေခြင်းကို ကြောက်တာပေါ့ဗျာ” ဘာမှန်းမသိဘဲ သေရမည်ကို ကြောက်တာပေါ့ဗျာဟူ၍ ဖြေကြားခဲ့၏။ သူထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ တုန်လှုပ်သော တရားကို ကျွန်ုပ်လည်း ကြောက်ရွှံ့ခဲ့ပါသည်။အမှန်တရားတွေပါ၊ကမ္ဘာ့ဘာသာ တရားတိုင်းက ကြောက်ရွံ့ခြင်းဟူသော “သေရမှာ ကြောက်ခြင်း ဘာမှမသိဘဲ သေရမည်ကို ကြောက်ရသဖြင့် ဘာသာတရား ဆိုတာရှိလာတာ အမှန်ပါပဲ။ သို့သော် ထိုအကြောင်းတရားကို ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မရှင်းပြဖြစ်သေးဘူး၊အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ကြားခဲ့သော သမ္မာကျမ်းပိုဒ်ကသူမှ မဖတ်သေးဘူးမဟုတ်လား!
“ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွှံ့ရသော အကြောင်းသည် သူတို့ မျက်စိ၌ မထင်ဟုကျမ်းစာလာသတည်း(ရောမ၃း၁၈)။
ဟုတ်ပါပေ၏။ သေခြင်းကို ကြောက်ရွှံပြီး၊ဘာမှမသိပဲနှင့် သေသွားရမည်ကို ကြောက်ရွှံ့ပြီးခြင်း “ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွှံ့ရသော အကြောင်းသည် သူတို့မျက်စိ၌ မထင်” ဘုရားကို ကျတော ကြောက်ရွှံ့ရမည်ဟု သူတို့မျက်၌ အရိပ်အယောင်တောင်မတွေ့ရပေ။
ကျွန်ုပ်၏ သာသနာခရီးသည် ၅၂နှစ် ကျော်လာပြီးဖြစ်သည်။ဇာတိပကတိ လူသားများ အားလုံးသည် အတူတူပင်၊ သာလွန်ကောင်းမွန်သောအချက်ကို မမြင်တွေ့ရပါ။ လူတိုင်းအတူတူပင်၊ ဘယ်လူမျိုးမဆို အတူတူပင်၊ဘ၀ အသက်တာ အပိုင်းအခြား အတူတူပင် ကောင်းမွန်သာလွန်သော အချက် ဟူ၍မတွေ့ရပါ။
“ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွှံ့ရသော အကြောင်းသည် သူတို့မျက်စိ၌မထင်ဟုကျမ်းစာလာသတည်း(ရောမ၃း၁၈)။
ထို့အတွက်ကြောင့် ထာ၀ရဘုရားက ပညတ်တရားကို ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပညတ်တရားသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ဖို့ ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ လူသားများအား အသိ၊သတိရှိစေဖို့ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ (ရောမ၃း၁၉-၂၀) အထိကို အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် အတူတကွ ဖတ်ကြားကြပါစို့!
“ပညတ်တရား၊ပြောသမျှသော စကားတို့သည် ပညတ်တရားကို ခံသောသူတို့နှင့် စပ်ဆိုင်သည်ကို ငါတို့သိကြ၏ ထိုသို့ဖြစ်၍၊ လောကီသား အပေါင်းတို့သည် စကားတစ်ခွန်းကိုမျှ မပြောနိုင်ပဲ၊ ဘုရားသခင် ရှေ့တော်၌ အပြစ်သင့်သော သူများ ဖြစ်ကြ၏။ ထိုသို ပညတ်တရားသည် ဒုစရိုက်အပြစ်ကို ထင်ရှားစေသည် ဖြစ်သောကြောင့်၊ ပညတ်တရား၏ အကျင့်အားဖြင့် ဘုရားသခင် ရှေ့တော်၌ အဘယ်သူမျှ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ မရောက်ရာ။(ရောမ၃း၁၉-၂၀)။
ဘုရားသခင်က ပညတ်တရားကို ပေးအပ်ခြင်းသည်” လောကီသား အပေါင်းတို့သည် စကား တစ်ခွန်ကိုမျှ မပြောနိုင်ဘဲ၊ ဘုရားသခင် ရှေ့တော်၌ အပြစ်သင့်သော သူများဖြစ်ကြသည်”ကို သိနားလည်ရန် ပေးအပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ “ပညတ်တရားအားဖြင့် သာလျှအပြစ် ရှိကြောင်းကို သိနားလည်” ရပါသည်။
တမန်တော်ကြီးက တစ်ဦးတယောက် ခြင်းစီ၏ အပြစ်ကို ပြောဆို ဆွေးနွေးထား ခြင်းမရှိပါ။ (ရောမ၃း၉-၂၀) ထဲက အပြစ်စာရင်းလည်း ပြုစုမထားခဲ့ပါ လုံး၀ ပြုစုထားပါ။ လူသည် အပြစ်တရား၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက် ကျရောက်နေသည် ဖြစ်ပြီး အပြစ်သားတို့၏ အခြအနေ တစ်ရပ်ကိုသာ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ အပြစ်သားတစ်ယောက်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူ မဟုတ် ကြောင်းကို အငယ်(၁၀)၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ အပြစ်သား တစ်ယောက်သည် ဘုရားသခင်ကို မရှာဖွေတတ်၊ နားမလည်ဟူ၍ အပိုဒ်ငယ်(၁၁)၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ ကောင်းသော အကျင့်ကို မကျင့်နိုင် ဟူ၍အပိုဒ်ငယ်(၁၂)၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ သူတို့သည် လျှာနှင့် လှည့်ဖြား ကြသည်ဟူ၍ အပိုဒ်ငယ်(၁၃)၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ သူတို့နုတ်သည် ကျိန်ဆဲ သောစကား၊ ကြမ်းသော စကားနှင့် ပြည့်၀သည်ဟူ၍ အပိုဒ်ငယ်(၁၄)၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ သူတို့ခြေသည် လူ့အသက်ကို သတ်ခြင်းငှါ လျှင်မြန်သည်ဟူ၍ အပိုဒ်ငယ်(၁၅)၌ ဖော်ပြထား ပါသည်။ သူတို့ သွားရာလမ်းသည် ပျက်စီးခြင်း၊ ဒုက္ခဆင်းရဲ ခြင်းရှိ၏ဟူ၍ အပိုဒ်ငယ်(၁၆)၌ ဖော်ပြ ထားပါသည်။ သူတို့သည် ချမ်းသာလမ်းကို မသိကြဟူ၍ အပိုဒ်ငယ်(၁၇)၌ ဖော်ပြပြီး အပိုဒ်ငယ်(၁၈)၌၊
“ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံရသော အကြောင်းသည် လူတို့ မျက်စိ၌ မထင်ဟုကျမ်းစာ လာသတည်း (ရောမ၃း၁၈)။
ဤ ကျမ်းပိုဒ်က လူမျိုးနွယ်စု တစ်ခုလုံးသည် ဆန့်ကျင်ဘက် အလင်းတန်းကဲ့သို့ လွဲမှားမှုကို ရည်ညွှန်း နေပါသည်။ ဒေါက်တာမာတင်လွိုင်ဂျုံးက သူ၏ အနက်ဖွင့်ကျမ်းတွင် ရောမဩဝါဒစာ အခန်း(၅)နှင့် ပါတ်သက်၍၊ “အပြစ်သားများသည် မကောင်းဆိုးဝါးသောသူ၊ ဘုရားရှင်၏ ဖန်းဆင်းသော ဤကမ္ဘာစင်္ကြာ၀ဋါကို အကြည့် တန်စေသောသူ၊ အလွန်အင်မတန် မုန်းတီးဖွယ် ကောင်းသောသူ၊ အလွန်အင်မတန်မနှစ်သက်ဖွယ် ကောင်းသော သူများ ဖြစ်ကြသည်။ (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., Romans: Exposition of Chapter 5, Assurance, Banner of Truth Trust, 1971, p. 123).
ဤအရာများသည် ဘုရားရှင်၏ ပညတ်တရားကမီးမောင်းထိုးပြ၍ မြင်ရသော အရာများ ဖြစ်သည်။”ပညတ်တရားသည် အပြစ်တရားကို ထင်းရှားစေသည်” (ရောမ၃း၂၀)။ လူတဦးက ဘုးရားရှင်၏ စည်းမျည်းကို ချိုးဖေါက်နေသည်ကို ထိုပညတ်တရားက မဖွင့်ပြဘဲ သိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ “အပြစ်၏ အခြေအနေတရပ်ကို သိခြင်း” ဆိုသည်မှာ၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က အပြစ် သားတို့၏ အခြေအနေမှန်ကို ဖေါ်ပြပေး၏။ ဘုရားရှင်၏ ပညတ်တော်ကို ချိုးဖေါက်သူ၊ ဇာတိပကတိသဘော၌ အမြစ်စွဲနေသူဟူ၍ ဖေါ်ထုတ်ပေးသည်။ ဘိန်းစွဲသော မိခင်မှဖွါးသော ကလေးသည် မူးယစ်ဆေးဝါး၌ အမြစ်စွဲနေဘိသကဲ့သို့။ အပြစ်သားများသည်လည်း ပညတ်တရား ချိုးဖေါက်သော အာဒံ၏သားများ ဖြစ်လာကြသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ (ရှင်ယောဟန်၁၆း၈)ကို ဖွင့်ထားကြပါ၊ အသိကျယ်ကျယ်ဖြင့် ဖတ်ကြားသည်။
“ဥပစ္ဈာယ်ဆရာသည် ရောက်လာလျှင် ဒုစရိုက်အပြစ်ကို ၎င်းအပြစ်ကင်းခြင်းကို၎င်း၊ အပြစ်စီရင်ခြင်းကို၎င်း၊ လောကီသားတို့ အားထင်ရှားစွာ ဖေါ်ပြမည်(ယောဟန်၁၆း၈)။
သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ဆင်းသက်သောအခါ၊ သူသည် အပြစ်ကိုဖေါ်ပြပေးပါမည်။ အပြစ်ကင်းခြင်း၊ အပြစ်ရှိခြင်းကို ၎င်းဖေါ်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ လူသည်ဘုရားရှင်၏ ပညတ်တော်ကို ချိုးဖေါက်၍် အပြစ်စွဲကပ်သောသူ ဖြစ်ကြောင်း၊ လူသည် ဇာတိပတိ၌ အမြစ်စွဲသောကြာင့် ဘုရားရှင်ကို အမြဲဆန့် ကျင်နေကြောင်းကို ဖေါ်ပြပေးနေပါသည်။
ယခု၊ မေးခွန်းတစ်ခုလေက်မေးပါရစေ၊ မိတ်ဆွေအားအပြစ်၏ တန်းခိုးက သင့်အား တင်းတင်း ကြပ်ကြပ်ဆုပ်ကိုင်ထားသည်ဟု ခံစားဖူးပါသလား?၊ မိတ်ဆွေသည်၊သင့်နှလုံးသား ခံစားရာ ဗဟိုချက်၌ပင် အပြစ်စွဲကပ်နေသူ ဖြစ်သည်ဟူ၍ ခံစားဖူးပါသလား? ဘုရားရှင်၏ မျက်မှေက်တော်၌ မိတ်ဆွေသည်၊ ဒေါက်တာလွှိင်ဂျုံးပြောထားသကဲ့သို့ “ဤကမ္ဘာစကြာ၀ဋာကို အကြည့်တန်စေသောသူ၊ မုန်းတီးဖွယ်ကောင်း သော သူနှင့် အလွန်မနှစ်သက်ဖွယ် ကောင်းနေသူ ပါလားဟူ၍ ခံစားဖူးပါသလား?၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ပဲပြင် ဆုံးမမူကို ခံယူပြီလား? (ရှင်လုကာ၅း၈) ထဲက ရှင်ပေတရုခံစားသကဲ့သို့
“ကျွန်ုပ်သည် အပြစ်များသော သူဖြစ်ပါ၏ အကျွန်ုပ်ဆီမှ ကြွသွားတော်မူပါဟု” ရှင်ပေတရု ခံစားသကဲ့သို့ မိတ်ဆွေလည်း မိမိ၏အပြစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ခံစားဖူးပါသလား?။
ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ လုပ်ငန်းစဉ်သည် သင်၏ အပြစ်ကို ဖေါ်ပြပြီး၊ ကျွန်ုပ်တော်^မသည် အပြစ်သား ဖြစ်နေပါလားဟူသော အသိကိုပေး၏။ ထို့ကြောင့် တရားဟော ဆရာတို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်နှင့်အတူ အပြစ်သားတို့အား”ဇာတိပကတိ၌ ကောင်းသော အရာတခုမျှ မတည်”(ရောမ၇း၁၈) ဟူသော တရားကို ဟောရပါမည်။ ခရစ်တော်ဘုရားသည် အကြီးမားဆုံးသော ဧဝံဂလိဆရာပင် ဖြစ်ကြောင်း တနင်္ဂနွေနေ့ညတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်ကို ဖတ်ကြပြီးဖြစ်ပါသည်။ အားလုံး (ရှင်လုကာ၁၃း၂၄) ကို ဖွင့်ထားပြီး အသံကျယ်လောင်စွာ ဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။
“ကျဉ်းမြောင်းသော တံခါး၀ကို ဝင်ခြင်းငှါ၊ ကြီုးစားအားထုတ်ကြလော့။ အကြာင်းမူကားအများ သောသူတို့သည် ဝင်ခြင်းငှါ အလိုရှိသော်လည်း မစွမ်းနိုင်ကြဟု ငါဆို၏(ရှင်လုကာ၁၃း၂၄)
ခရစ်တော်ဘုရားရှင်က ကောင်းကင်ဘုံကို ဝင်ရောက်ဖို့ရာ ပြင်းပြင်းထန်းထန်းကြိုးစားအားထုတ်ရ
မည်ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့ကဲ့သို့ ကြိုးစားလုပ်ပြီးပြီးလား?၊ ဤတရားဒေသနာတော်ကို ထပ်ခါတလဲလဲ ဖတ်ကြားပြီးပြီလား? သင့်အပြစ်များကို သိနားလည်ပြီးအသိ၊ သတိရှိဖို့ ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းပြီး ဆုတောင်းနေပြီးလား? ၊မာတင်လူသာပြောသကဲ့သို့ ဘုရားရှင်က သင့်အား ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်စေသည့် တိုင်အောင် ဆုတောင်းပြီးပါသလား? ထိုကဲ့သို့ ကြီးစား ဆောင်ရွက်မှုမရှိပဲ။ သင်သည် ကျဉ်မြောင်းသော တံခါးသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါပြီဟု ပြောနိုင်မည်လား? အကယ်၍ သင်သည် ကျဉ်းသော ကျဉ်းသောတံခါး၀ကို ဝင်ဖို့ကြိုစား လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိပဲ၊ သင်အသက်တာ၏ နောက်ဆုံးခရီးကို ဘယ်လိုနည်းဖြင့် ကျော်ဖြတ်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါသလဲ့? ၊ကြိုးစား လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် သင့်အသက်တာ ကယ်တင်ခြင်း မရနိုင်ပါ။ လုံး၀မရချေ။ ကြိုးစားလုပ်ဆော်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်သည်၊ ကြိုးစား လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ထာ၀ရအသက်နှင့် ပို၍ အလှမ်းဝေးကွာသည်ကို ထောက်ပြပြ နေခြင်းသာဖြစ်သည်။ သင့်ကိုယ်တိုင် ကြိုးစား၊ လုပ်ဆောင်ချက်သည် သင့်၏ လမ်းမှန်ကို သင်ကိုယ်တိုင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းကို ထောက်ပြ နေခြင် ဖြစ်၏။ သင်သည် ဘုရားရှင်၏စကားကို နားမခံခြင်းကိုပြသ၏။ ဘုရားရှင်ကို ဆန့်ကျင် နေခြင်း ဖြစ်သည်ကို ပြသခြင်းဖြစ်၏၊ သင်၌ အပြစ်က စွဲကပ်နေသည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၏ တောင်းဆိုမှုကို မပြည့်ဆည်း နိုင်သဖြင့် သင့်အသက်တာ ထ၀ရဆုံးရှုံးပါမည်။ အပြစ်စွဲ ကပ်နေသော သင့်အသက် တာ၏ အရည်ချင်းက ဘုရားရှင်၏ တောင်းဆိုထားသော အရည်အသွေးကို မမှီနိုင်ပါ။
ထာ၀ရအသက်နှင့် သင်သည်အလှမ်းကွာနေသည်ဟု ခံစားဖူးပါသလား? သင့်၏ကြီုးစား လုပ်ဆောင်မှုက ဘုရားရှင်၏ တောင်းဆိုသော အရည်အသွေးကို မမှီနိုင်ဟူ၍ သင်ခံစားဖူးပြီးလား? သင်သည် ဇာတိပကတိ လူသားဖြစ်၍ သင့်နှလုံးသား ဆိုးညစ်နေသဖြင့် သင်သည် ဘုရားသခင်ထံသို့ မချည်းကပ်နိုင်ဟု မိမိကိုယ်ကို ခံစားပါသလား?
သင်မပြုလုပ်နိုင်သော အရာကို သင်ပြောနေမည်ဆိုပါက သင့်ကို သင့်လှည့် ဖြားရာကျမည်။ လုံး၀မှား ပါသည်။ သင်လုပ်သင့်သော အရာကိုသာ လုပ်ဆောင်ဖို့ တိုက် တွန်းပါသည်။ သင်သည် “အမျက်တော်ကို ခံရသောသူ” (ဧဖက်၂း၃) ဖြစ် သည်ကို အမှန် တကယ် သိရှိဖို့ ဝန်ခံရပါမည်။ ဂျော့ဝှိုက်ဖေးလ်းက ပြောကြားသကဲ့သို့ “သူတို့သည် လုံး၀ဥသုံပျက်းစီးသူဖစ်၍ မိမိတို့၏ ဇာတိသဘောကို မုန်းတီးခြင်း မခံစားပဲစစ် မှန်သော ခရစ်ယာန် ယုံကြည် သူတစ်ယောက် ဖြစ်မလာနိုင်ပါဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သင်သည် ဘုရားရှင်ကို မေတ္တာမှန်၊ မေတ္တာစစ်အားဖြင့် မချစ်နိုင်သူဟု ခံစားပါသလား? ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွှံ့ မိပါသလား? ဘုရားရှင် မပါရှိပဲ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် မိမိ၌ သမ္မာတရားမရှိနိုင် မျှော်လင့်ရာ မရှိဟူ၍ သင်ခံစားပါသလား? (ဧဖက်၂း၁၂)။ ထိုသကဲ့သို့ သင်စဉ်းစား ခံစားဖူးပြီလား? အကယ်၍ ထိုကဲ့သို့ စိုးစဉ်မျှမခံစားပဲ၊ ကျည်းမြောင်းသော တံခါးဝင်နိုင်ဖို့ မည်သို့ မျှော်လင့်နိုင်ပါမည်နည်း?(ရှင်လုကာ၁၃း၂၄)။ ယောနသန်အက်ဝပ် ပြောကြားသည်မှာ၊
ထိုကဲ့သို့ တည်ကြည်စွာ လုပ်ဆောင်ခြင်း တိကျသေချာစွာ ကြိုးပမ်းခြင်းသည်၊ လူသားများ အချင်းချင်း တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အကျွမ်းတဝင် ရင်းနှင်းဖို့ ဘုရားရှင် အသုံးပြုသော သာမာန်နည်းလမ်းပင် ဖြစ်၍၊ သည်နှလုံးသား၏ မြင်နိုင် ခြင်းစွမ်းအားမှ မြော်လင့်ရာမဲ့ ဘ၀ကို အသိအာရုံဖြင့် သိခြင်းနှင့် မိမိတို့၏ ပင်ကို သဘာ၀သည် ခွန်အားနည်းခြင်း၊ ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းမ ရှိခြင်းကို ပြသပေးပါသည်။ ဤသည် ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက် အတွေ့အကြုံတခုကို မိမိကိုယ်ကို မိမိအားကိုး လုပ်ဆောင် သူများအား ဘုရှားရှင် နည်းလမ်းသဖွယ် အသုံးပြုခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို အားကိုး နေခြင်းသည် မဟာအမှား တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဆန့်ကျင်ပြောင်းပြန် အမှန်တရား ပင်ဖြစ်သည်။ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်လေရာ၌ အကျိုးမရှိ လှသဖြင့် ငြိမ်သက်စွာ နားခိုရာပင် မတွေ့ရ၊ နောက်ဆုံးတွင် သူတို့သည် မိမိကြိုးစား လုပ်ခြင်းဖြင့် အချည်းနှီး သက်သက်ဖြစ်ကြောင်း သိမြင် လာပါသည်။ (Jonathan Edwards, Works, The Banner of Truth Trust, Volume I, pp. 656-657; Message title taken from this passage).
သတင်းကောင်း ဧဝံဂေလိ တရားသည် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း ခံရသည်ထက်ပိုသော အဓိပ္ပါယ် များကို ပေးစွမ်းထားပါသည်။ ခရစ်တော်သည် သင့်အတွင်း နှလုံးသားကို ပြုပြင်ပေးသည်။ သင်အား အသစ် ပြုပြင်သော အသက်တာ၌ ပြောင်းလဲစေသည်။ (Iain H. Murray, The Old Evangelicalism, The Banner of Truth Trust, 2005, p. 13). မိတ်ဆွေ၊ သင်သည် အသစ်သော အသက်တာကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ပါသလား?သင့်ဘ၀ အသက်တာနောက်ကြောင်း အသက်ရှင်မှုအတွကါ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း ရယူလိုပါသလား? ၊ခရစ်တော် သခင်ထံသို့ တိုးဝင်ချဉ်း ကပ်နေပါသလား? အသင်းတော်မှ သင့်အား လက်ခံအသိအမှတ်ပြုဖို့ နည်းလည်းရှာဖွေ နေပါသလား? အသစ်သော အသက်တာ၌ မွေးဖွားဖို့ ကြိုးစား လုပ်ဆောင်နေပါသလား? ၊သင်သည သာ၍ သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ် ခံစားချက် များဆီသို့ သင်၏ အသက်တာ ရောက်ရှိဖို့ ရှာဖွေနေပါသလား?။ ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရပ်လျှက် (ရှင်လုကာ၁၃း၂၄)ကို အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် ဖတ်ကြပါစို့!
“ကျဉ်းမြောင်းသော တံခါး၀ကို ဝင်ခြင်းငါS ကြိုးစားအား ထုတ်ကြလော့၊ အကြာင်းမူကား အများသော သူတို့သည် ဝင်ခြင်းငှါ အလိုရှိသော်လည်း မစွမ်းနိုင်ကြဟု ငါဆို၏(လုကာ၂၃း၂၄)။
“အို! အဖ ကျွန်ုပ်ကို အကျွန်ုပ်ကျွန်ပြုခြင်းမှ လွှတ်မြောက်ခွင့်ပေးပါ”ဟူ၍ အသက်တာ ပြောင်းခြင်းအတွက် ဆုတောင်းပြီးနောက် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ ကျွန်စနစ်ကို ဝီလျှံဝိုက်ဆာဖော့ လွှတ်မြောက်စေခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲသို့ သင်လည်း ဆုတောင်း ခဲ့သဖူးသလား? ဤတနင်္ဂနွေ ညနေဝတ်ပြုခြင်း၌ ဟောကြားသော တရားဒေသနာတော်ကို ဖတ်ကြားသည့် အခါတိုင်း သင်သည် အပြစ်ဇာတိရှိသူ ဖြစ်သည်ဟု ခံစားမိပါသလား? သင့်ကို သင်ကျွန်ုပြုခြင်းမှ လွှတ်မြောက်ဖို့ ခရစ်တော်သခင်ထံ ညတိုင်း ဆုတောင်းနေပါသလား?
“ကျဉ်းမြောင်းသော တံခါး၀ကို ဝင်ခြင်ငှါ ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့။အကြာင်းမူကား အများသော သူတို့သည် ဝင်ခြင်းငှါ အလိုရှိသော်လည်း မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြဟု ငါဆို၏။ (ရှင်လုကာ၁၃း၂၄)
- ဒေသနာတော် မတိုင်ခင် မစ္စတာ အေဘလ်ဖဖြူးဟုန်မီမှ (ရောမ၃း၉-၂၀) အထိကို ဖတ်ကြား ပေးပါသည်။
-ဒေသနာတော် မတိုင်ခင် မစ္စတာ ဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိတ်ဖက်စ်မှ ရေးစပ်သူ နာမည်မသိသီချင်း၊ “ခွင့်မလွှတ်နိုင်သောအပြစ်”ကို O Set Ye Open Unto Me သံစဉ်ဖြင့် သီဆိုပေးပါသည်။